भगवानले हामि सबैको रक्षा गरुन ! हेर्नुहोस् पौष १० गते शुक्रबारको राशिफल ! -
भगवानले हामि सबैको रक्षा गरुन ! हेर्नुहोस् पौष १० गते शुक्रबारको राशिफल !
आज श्री शाके १९४२ बि।स।२०७७ साल पौष १० गते शुक्रबार इश्वी सन २०२० डिसेम्बर २५ तारीख मार्गशीर्ष शुक्लपक्ष एकादशी तिथी अश्विनी नक्षत्र पश्चात भरुणी नक्षत्र शिव योग वव करण चन्द्रमां मेष राशिमा आनन्दादि योगमा वज्र योग प्रमादीनाम संवत्सर सुर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु मोक्षदा एकादशीव्रत, गीताजयन्ती, क्रिसमस डे ९ज्यो।प।सरोज घिमिरे०
मेष राशि ९चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ० दाम्पत्य सम्बन्धमा सुधार रहनेछ । प्रतिश्पर्दा जन्य कार्यमा समय उत्तम रहेकोछ । पारीवारिक मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय उत्तम रहेकोछ । नयाँकार्य थालनिको योग रहेकोछ । सामाजिक कार्यमा सहभागीता जनाउने समय रहेकोछ । ब्यपार ब्यवसायमा समय उत्तम रहनेछ । अधुराकार्यहरु सुचारु गर्न समयले बिशेष साथ दिनेछ ।
बृष राशि ९इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो० सामान्य आर्थीक अभाबको सामना गर्नु पर्ने दिन रहेकोछ । खराब संगतका कारण सामान्य अप्जस सहनु पर्ला । प्रतिपक्षीहरु सबल रहनाले कार्य सम्पादनमा साबधान रहनु होला । मनोरञ्जन मुलक सरसामानको क्षेत्रमा सामान्य खर्च हुन सक्नेछ । तात्कालिक खर्चका कारण सामान्य आर्थीक झमेलामा फस्न सकिने सम्भाबना रहेकोछ ।
मीथुन राशि ९का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह० पुरानो लगानि उठाउने राम्रो समय रहेको छ । मित्र जनको साथ सहयोग बाट कार्य सम्पादनमा मदत पूग्नेछ । प्रतिस्पर्दामा अबल रहीनेछ । आय मुलक कार्यको थालनि हुनेछ । नयाँ कार्यको थालनिले मनमा हर्ष पैदा गर्नेछ । अध्यन अध्यापनका क्षेत्रमा खर्चिएको समय उत्तम साबित रहने योग रहेकोछ ।
कर्कट राशि ९हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो० मान्यजनको साथसहयोगको कमी महसुस गरीनेछ । भौतिक साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित हुन सक्छ । सामान्य कार्यमा धेरै समय र श्रम खर्चनु पर्ला । पारीवारको साथ सहयोग द्वारा आम्दानि क्षेत्रमा मार्गदर्शन मिल्नेछ । परीश्रमको उचित मुल््याङ्कन नहुनाले मनमा खिन्नताले बास गर्नेछ ।
सिंह राशि ९मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे० मनोबिलासिताका सामान खरीद योग रहेको छ । दाजु भाई तथा इष्ट मित्र बिच सम्बन्ध सुधार रहनेछ । आफन्त जन बिच भेटघाट हुन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ । पराक्रममा बृद्धि हुनेछ । नजिकका ब्यक्ति बाट बिश्वासघात हुन सक्छ । धार्मिक क्षेत्रको यात्रामा समय ब्यतित रहनेछ ।
कन्या राशि ९टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो० मनमा चन्चलताले बास गर्नाले सामान्य कार्यका निम्ती अधिक श्रम खर्चनु पर्नेछ । वाणीका कारण सामान्य वादविवाद आईपर्न सक्नेछ । नजिकका साथी भाईहरु सगँ सामान्य मनमुटाब हुन सक्नेछ । शारिरीक अस्वस्थाको सामना गर्नु पर्ला । गरीरहेको कार्य क्षेत्र परिर्वतनको सम्भाबना रहेकोछ ।
Previous भगवानले हामि सबैको रक्षा गरुन ! हेर्नुहोस् पौष ९ गते बिहिबारको राशिफल
Next भगवानले हामि सबैको रक्षा गरुन ! हेर्नुहोस् पौष ११ गते शनिबारको राशिफल